ပခုက္ကူမြို့ က သရဲ အခြောက်ဆုံး နေရာ (၁၀) ခု ” ( လမ်းကြုံရင် ဝင်လေ့လာ ကြည့်ကြ ပါ ) – Let Pan Daily
ပခုက္ကူမြို့ က သရဲ အခြောက်ဆုံး နေရာ (၁၀) ခု ” ( လမ်းကြုံရင် ဝင်လေ့လာ ကြည့်ကြ ပါ )
ပခုက္ကူမြို့က သရဲ အခြောက်ဆုံး နေရာ ( ၁၀ ) ခု ကို ဖော်ပြပေး လိုက် ပါ တယ် ။ မိတ်ဆွေ တို့ လေ့လာချင် ရ င်လည်း ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက်လေ့လာနိုင်အောင် လိပ်စာတွေပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်ပေး ထား ပါ တယ် ခင်ဗျာ။
(၁) ခေါင်းကြီးတစ္ဆေ – မြို့ရှောင်လမ်းကနေ ပခုက္ကူ တက္ကသိုလ် ကို အသွား၊ မုခ်ဝနားက ရေကာတာရယ်၊ ထနောင်း ပင်ရယ် ရဲ့အကြားမှာ တစ်ခုခုရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အလွယ်ပဲ ခေါင်းကြီး တစ္ဆေလို့ခေါ်တယ်။ ဟီလီယံမဝတဲ့ မိုးပျံပူဖောင်းကြီးလို ပိန်လိုက်ဖောင်း လိုက် နဲ့ အနက်ရောင် အရိပ်လိုလို တစ်ခုခုက မိတ်ဆွေကို စောင့်ကြိုနေ ပါတယ်။ နံနက်ခင်း ငါးနာရီခွဲ သို့မဟုတ် ညနေ ခုနစ်နာရီဝန်းကျင်မှာ မိတ်ဆွေသွားကြည့်ပါ။ တကယ်လား၊ ကောလ ဟာလ လား ဆိုတာကတော့ မိတ်ဆွေရင် ဆိုင်ရမယ့် အကျပ် အတည်း ပါပဲ။
(၂) ရွှေလမ်းထောင့် က ဆိုင်ကယ်သမား – မိတ်ဆွေ ဦးထုတ်မပါပဲ ဆိုင်ကယ်မစီးပါနဲ့။ ရွှေလမ်းထောင့်က ဆိုင်းဘုတ်ကနေ ကျောင်းဂိတ်ဟောင်းအလွန်အထိ ဆိုင်ကယ်တရကြမ်းစီးမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေနဲ့အပြိုင်စီးမယ့် တစ် စုံတစ်ဦးပေါ်လာနိုင် ပါတယ် ။ သို့သော် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သူက ဆောင်းအကုန်လောက်မှ ထွက်လာ တက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူမှထွက်လာပြီဆိုရင် မိတ်ဆွေ့ဦးခေါင်းအတွက် ရင်လေးစရာ ပါပဲ ။
(၃) သညိုပင်က မီးခွက်တစ္ဆေ – မိတ်ဆွေ တစ္ဆေ မီးလုံး ကိုအ ယုံအကြည်ရှိ ပါသလား..? မယုံလို့ အတက်စမ်းချင်ရင် အမှတ်ခြောက်ရဲ့ သညိုပင်ဆီကို လာခဲ့လိုက်ပါ။ ည၊ ကိုးနာရီခွဲဝန်းကျင် တစ်ယောက်တည်း ထနှောင်းပင်နဲ့ သညိုပင်တို့ကြား ဆက်ထားတဲ့နွယ်ပင်ဆီကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာမြင်ရမလဲ ဆိုတာ ကတော့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးတည်း အတွက် မေးခွန်းနဲ့အဖြေပါပဲ။
(၄) အထက (၁) ရဲ့ကျောင်း စောင့်ကြီး – ညနေ နေဝင်ရိုးရီအချိန်မှာ ခုနစ်တန်းဆောင်ကြီး ခေါင်မိုးပေါ်ကိုလှမ်းကြည့် လိုက်ပါ ။ တစ်ခုခု ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုမြင်ရင်တော့ မိတ်ဆွေ ခြေထောက်ကသာ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(၅) အထက (၁) ကျောင်း ငါးတန်းဆောင် – ထ(၁) ကျောင်းရဲ့ ငါးတန်း E ခန်းကို ကျောင်းဆင်းချိန် လူတစ်ယောက် မှ မရှိတော့တဲ့ အချိန် မှာ နားကပ်ထောင်ကြည့်ပါ။ တစ်ခုခု ပြေးလွှားနေတာကြားရ လိမ့်မယ် ။
(၆) အထက (၁) ကျောင်း ခြောက်တန်းဆောင်သစ် – ခြောက်တန်းဆောင် သစ်ရဲ့ နောက်ဘက် တစ်ယောက်တည်းသွားရဲလား? ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒုတ်တစ်ချောင်းကိုသာယူမသွားနဲ့ပေါ့။ တချို့ကလေးတွေက ဒုတ်ပါရင် ဆရာလို့ပဲထင်ပြီး နှုတ်ဆက်တက်ကြတယ်။
(၇) ဘုန်းကြီးလမ်းက တိုက်ဟောင်းကြီး – အလယ်တိုက် လို့ခေါ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်းက တိုက်ဟောင်းကြီးရဲ့ဝရန်တာကနေ မိတ်ဆွေကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကများ လက်ပြလိုက်ပြီဆိုရင် ကြာကြာမကြည့်မိစေနဲ့။ ….မေမေ သားကို လက်ပြနေတယ်…..မေမေ…..လာခဲ့တဲ့….မေမေ….သား ကိုခေါ်နေပြီ……
(၈) တီတီစီ မိန်းကလေးဆောင် – တီတီစီ ရဲ့ အိမ်သာခြောင်ဘက်က မိန်းကလေးဆောင်မှာ တီချယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူမကအမြဲနောက်ကျောယားနေတက်တယ်။ သူအကုတ်ခိုင်းလို့ ဆရာမ စကားနားထောင်ပြီး နောက်ကျောကိုကြည့်မိပြီဆိုရင်တော့…….
(၉) ရွှေချောင်းတံတားကြီး – ရွှေချောင်းတံတားကြီးပေါ်မှာ မနက်သုံးနာရီလောက် ဆိုင်ကယ်စီးရဲလား? ခေါင်းမပါတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကလွဲလို့ မိတ်ဆွေကိုဘယ်သူမှ နှောက်ယှက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
(၁၀) ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် အီးမေဂျာဆောင်က F2-B ရဲ့ငိုရှိုက်သံ – ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် အီးမေဂျာဆောင်ကိုအလည်သွားရင် ညနေလေးနာရီခွဲဝန်းကျင် အိမ်သာဘက်ကိုမသွားမိပါစေနဲ့။ ဂျပန်မှာ Hanako၊ အင်္ဂလန်မှာ Charlie, အဲ၊ မြန်မာမှာတော့ သိချင်ရင်နာမည်သွားမေး လေဗျာ…..သဘောကောင်းမှာပါ။
ကဲ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပခုက္ကူမြို့ကလေးကနေ မိတ်ဆွေ ကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
လမျးမကွီးတှေ ထကျမှာ ပွနျလညျ အသကျဝငျလာခဲ့တဲ့ ရနျကို ကုနျအောငျရှငျးမယျ့ ရနျကုနျ သပိတျစဈကွောငျး
အလွန်ကြောက်စရာကောင်း တဲ့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီး လာနေပီ သတိထားကြပါ!!!
ကြှနျတေျာ့ ညီမလေး နဲ့ အမကေ ရှဆေ့ငျ့ နောကျဆငျ့ . .ဆယျရကျပဲ ကှာတယျတဲ့ (ကိုဗဈ ဖွဈရပျမှနျ ဖွဈရပျ တခု)